ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ထဲက စိတ်ပျက်စရာ အလွဲများ - Shwe Khit Online TV
HomeFunဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ထဲက စိတ်ပျက်စရာ အလွဲများ
October 24, 2021 Yan Fun 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ထဲက မရိုးနိုင်သော အလွဲ တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုမျိုး အကြီးအကျယ် လွဲကြလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ဒူးတုန်တဲ့သူတွေ မတတ်သင့်တဲ့ လှေကား
အခုမြင်နေရတာကတော့ မြေညီထပ် နဲ့ ပထမ ထပ်ကို ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ လှေကား ပုံစံပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အလေးအပင်တွေ သယ်ပြီး ဒီလှေကားကနေ တတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို အ၀လွန်သူတွေ နဲ့ ဒူးတုန်တဲ့သူတွေ အတွက်လည်း မသင့်တော်တဲ့ လှေကားပုံစံပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ ရတဲ့ နေရာလေးမှာ ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်
ဒီလို တိုက်မျိုးထဲက ရပ်ကွက်ထဲမှာ မြင်သာ ထင်သာရှိတဲ့ တိုက်ပုံစံမျိုးလို့ ပြောရမှာပါ ။ ရတဲ့ မြေနေရာလေးမှာ အဆင်ပြေအောင် ဆောက်ပေးထားတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးပညာရှင်ကိုတော့ လေးစားမိစေမှာ အသေအချာပါပဲ ။ ဒီ တိုက်ခန်းထဲ နေမယ်ဆိုရင်တော့ အရပ်ရှည်တဲ့ သူတွေအတွက် အိပ်တဲ့အခါ ခေါင်းနဲ့ နံရံ ၊ ကြမ်းပြင် ထိနေမှာ ဖြစ်သလို Toilet ထဲဝင်ရင်လည်း စိတ်ကျဉ်း ကြပ်နေစေမှာ အသေအချာပါပဲ ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း Foundation
အိမ် တစ်အိမ် ဆောက်တော့မယ် ဆိုရင် အောက်ခံ Foundation သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ကြတယ်ဆိုတာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ သမာရိုးကျ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အခု မြင်နေရတဲ့ အိမ်ကတော့ foundation ကို တစ်ခြား သူတွေထက် ပိုပြီး ဆန်းဆန်းပြားပြား လုပ်ချင်ပုံပါပဲ ။ အိမ်ရဲ့ အောက်ခြေ တစ်ခုလုံးကို တာယာ ပေါင်း မြောက်များစွာ နဲ့ ခံထားပြီး အိမ်ဘေးနား က လမ်းကိုတောင် တာယာ ထပ်ဖြည့်ပေးထားလိုက်ပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ငယ်စဉ်ကြီးလိုက် အိမ်
အခု မြင်နေရတဲ့ အိမ်ကတော့ အောက်ခြေ အထပ်သေးသေးလေးကနေ အပေါ်အထပ်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ကြီးသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအိမ်ကို ဆောက်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ဆရာ ကတော့ အောက်ခြေ အထပ် နဲ့ အပေါ် ထပ် ကို အကြီး၊ အသေး လွဲပြီး မှား ဆောက်မိသွားပုံပါပဲ ။ ဟာသ အနေနဲ့ ရယ်စရာ ကောင်းပေမယ့် လူနေဖို့ အတွက်ကတော့ တော်တော်လေးကို မသင့်တော်ပါဘူး ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဆွဲအားကို မထီမဲ့မြင် လုပ်နေတဲ့ ထိုင်ခုံ
ဒီခုံလေးကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲအားကို မထီမဲ့မြင် လုပ်ပြီး ဆောက်ထားတဲ့ ပုံပါပဲ ။ ဆင်ခြေလျှော တစ်ခု ပေါ်မှာမှ ထိုင်ခုံ ( ၂ ) ခုကို ဆောက်ပေးထားတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပြီး ဒီ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်မယ့်သူ ကတော့ ခုံတန်းကိုပါ သေချာ ကိုင်ထားမှ အဆင်ပြေမှာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ လျှို့ဝှက် ဝင်ပေါက်တံခါး
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမှာကတော့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက် တံခါး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ တံခါးအတွက် လှေကားတွေ ပါ အမှန်အကန် ဆောက်ပေးထားပေမယ့် အခန်းမရှိတဲ့ ဒီ တံခါးကို မြင်ရတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ထူးဆန်းစေမှာ အသေအချာပါပဲ ။ shwekhitonlinetv.com
၇ ။ အကျဉ်းထောင်ပုံစံ ပြတင်းပေါက်
အခု မြင်နေရတဲ့ ပြတင်းပေါက်ပုံစံကတော့ အကျဉ်းထောင်ထဲက သံတိုင်ပုံစံတွေ နဲ့ အတူတူပဲလို့ မြင်ယောင်မိကြမှာပါ ။ ဒါကို ဆောက်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ idea ကတော့ တစ်ကယ့်ကို လက်လန်စေလောက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး လောကထဲက မထင်ထားတဲ့ အလွဲ တစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၈ ။ ( ၅ ) ပါး သီလ လုံမှ ထိုင်သင့်တဲ့ ထိုင်ခုံ
ဒီ တစ်ခါ တွေ့ရမှာကတော့ အများသုံး ထိုင်ခုံတွေ ရဲ့ ထူးထူးခြားခြားပုံစံပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထိုင်ခုံရဲ့ ပုံစံက မထူးခြားပေမယ့် သူ့ရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ ဆူးပင်တွေကတော့ ဘာကြောင့် ထည့်ထားလဲ စဉ်းစားစရာပါ ။ သေချာ တာကတော့ ဒီခုံကို ဆောက်ထားတဲ့ သူဟာ နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ကူးပြောင်းသွားပြီး တစ်ခြားသူတွေကို မထိုင်စေချင်လို့ ခုလို လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ ။ shwekhitonlinetv.com
၉ ။ ကြွေပြားကို ပြောင်းပြန် ကပ်ထားတဲ့ ပညာရှင်
အခု နောက်ဆုံး မြင်ရမှာကတော့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဝင်ပေါက်မှာ ကြွေပြားတွေကို ပြောင်းပြန် ကပ်ထားတဲ့ ပုံရိပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖြစ်နိုင်တာ ကတော့ ကြွေပြား ကပ်တဲ့သူဟာ ကပ်နေရင်း အာရုံများနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ကြွေပြား ဒီဇိုင်းကို ဝယ်ပြီးမှ မကြိုက်တော့လို့ ပြောင်းပြန် ကပ်ထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ဆောက်လုပ်ရေး လောကမှ မရိုးနိုင်တဲ့ အလွဲတွေ အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း ခုလို ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
Shwe Khit Online TV မှ ရေးသားတင်ဆက်ပါသည်။ ကူးယူဖော်ပြခွင့်မပြုပါ။
အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေ အထင်မှားနေကြတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်များ